७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् जान्नुस ? (भिडियो सहित ) – Online Khabar 24
७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् जान्नुस ? (भिडियो सहित )
७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाको बारेमा धेरै चर्चा भयो । उनको साथमा चालक दलका ४ जनासमेत थिए ।
Prevयिनै हुन आज दु’र्घटना हुदा अ’कालमै ज्यान गु’माएका आमा छोरा !
nextवर्षमान पुनलाई यस्तो खतरानक वंशानुगत रोग देखियो, उपचारका लागि यो देश लैजाने तयारी !